Vakodrazana sy ny dihy nentim-paharazana - Ramilison Be Sigara afo tsy maty - L'Hebdo de Madagascar
Vakodrazana sy ny dihy nentim-paharazana – Ramilison Be Sigara afo tsy maty
Manomboka ny volana marsa ka hatramin’ny volana oktobra no fotoam-piasan’ny tarika Ramilison Be Sigara zanany. Efa tapitra voatetin’ny tarika ny Nosy iray manontolo ankoatry ny faritry Sava eny efa tonga hatrany ampitan-dranomasina mihitsy aza. Tao anatin’ny tarika Sahondrafinina reniny ary nitohy taty amin’ny Sahondrafinina zanany, Ramilison rainy.
N isintaka tao anatin’ny tarika Sahondrafinina izy, ny taona 1986 noho ny fahamaroan’ny taranak’izy mivady, fito mianadahy. Efa-bavy sy telo mirahalahy no zanaky Ramilison. Ny mpijery hira gasy no nametaka ny anarana hoe Ramilison Be Sigara, noho izy tsy maty afo mihitsy na nihira na nandihy, na manentana eny an-tsehatra, raha toa ka Ramilison Fenoarivo, ny anaran’ny tarika tany ampiandohana. Nodimandry tamin’ity taona ity, Ramilison Be Sigara raha ny taona 2001 ny vadiny no nandao azy. Nizara roa ny tarika ny taona 2016 ary niverina nitambatra indray ity taona ity taorian’ny famonosan-damban-dRamilison mivady ary ny fangatahana maro be nataon’ny mpijery sy ny fianakaviana. Ankehitriny, izy mirahalahy no mamelo-maso ny anaran-dray, taorian’ny fodiamandrin’ny faralahy tamin’izy mpiray tampo, ny volana febroary teo.
ka tsodrano tamin’ny tarika Sahondrafinina zanany fa hanangana tarika iray vaovao, Ramilison. Nampitondrainy ny anarany sy ny toerana nipoiran’ny vakodrazana ny tarika, tany amboalohany, dia Ramilison Fenoarivo. Niova ho Ramilison Be Sigara izany taty aoriana. « Sao io anarambositra napetakan’ny mpijery io aza no mety hampalaza antsika fa handao hovaina », hoy Ranaivoharison Jean Félix, zanaka lahimatoan-dRamilison, mitantara ny nanovan’ny rainy ny anaran’ny tarika. Ny zanany fito mianadahy niampy ny namany ary fianakaviana vitsivitsy no mpikambana tao anatin’ny tarika tany amboalohany. Niovaova teny ny mpikambana rehefa nitsahatra tsy niaka-tsehatra intsony izy efatra mirahavavy. Izy mirahalahy, Ranaivoharison Jean Félix, lahimatoa sy Ranaivoharison Joachim Anselme, lahiaivo no mamelo-maso ny anarandrainy.
Tarika tsy mikombona ny tarika Ramilison Be Sigara fa afaka mifanerasera amin’ny tarika samy mpihira gasy na amin’ny mpanakanto hafa. « Ireny mpivaro-kena sy mpivarodamba, na Hianatra sa hanambady, na Foksionera sy saofera ireny izao hiran’ny tarika Ramilison Be Sigara avokoa kanefa misy ny mpanakanto mangataka ny hihira azy. Hatao tsara fotsiny ny fifanarahana mba tsy hiova be tamin’ny namoronana azy tany amboalohany ny hira. Misy koa ny hiran’ny mpanakanto sasany mba hakanay sombiny kely rehefa eny an-tsehatra eny izahay », hoy Ranaivoharison Jean Félix, ankitsim-po tsy niolankolana. Ny mpihira gasy sy ny mpanao vakodrazana no hany sisa mitazona ny mahamalagasy. Samy manana kianja avokoa ny mpanao fanatanjahantena sy ny mpanakanto. « Anaran-tsy very sisa izany hoe Kianja mitafon’ny mpihira gasy tety Isotry izany. Kanefa tokony mba hojeren’ny mpitondra fanjakana ihany izahay fa tsy isaky ny fampielezankevitra na fotoan-dehibe eto amin’ny firenena vao mba misy mpijery », hoy Jean Félix, namarana ny teniny, nandritra ny tafatafa natao taminy.
Grande réforme minière – Haro sur les « orpilleurs »
Planification familiale – Une campagne à la radio cible les familles